Ubuntu – Ck4Ubuntu
how to update, install and upgrade in Ubuntu Terminal ?
March 1, 2016 chitkoko	Leaveacomment Community, install20things, Installaltion, Software, Ubuntu
apt-get –yes –force-yes upgrade && \_
apt-get –yes –force-yes install “several packages” && \_
apt-get autoclean && poweroff
သာမန် sudo နဲ့ သုံးတဲ့အခါ update နဲ့ upgrade လုပ်နေတာ ကြာသွားရင် password ပြန်တောင်းပါလိမ့်မည်။
ဒီအတွက် sudo bash ဆိုရင် ထပ်မတောင်းတော့ပါ ။
A) ppa မဟုတ်လို့ သို့မဟုတ် gpg key မထည့်ထားလို့ စိတ်မချရလို့ ဆိုပြီး အတည်ထပ်ပြုခိုင်းဖို့ Y ကို ထပ်နှိပ်ခိုင်းတတ်ပါသည် ။
B) Close Source / EULA ဖြစ်နေလို့ တကယ်သွင်းမလား ထပ်မေးပြီး Yes နှိပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည် ။
ဒါတွေအကုန်လုံးကို တခါတည်း မမေးအောင် –yes –force-yes သုံးပါသည် ။
credit : Ko Ko Ye
အသေးစိတ် command တွေအလုပ်လုပ် ပုံကို သိချင်ရင် http://explainshell.com/ တွင် command ရိုက်၍လေ့လာနိုင်ပါသည် ။
Windows password remove using Ubuntu USB STICK
July 12, 2015 chitkoko	Leaveacomment My Story, Software, Ubuntu, Windowspassword
step 1. Create ubuntu usb using unetbootin or yumi.
step 2. Change your C: Partation /Windows/System32/cmd.exe to narrator.exe
And narrator.exe to cmd.exe
Step 3.click narrator.exe and type following
net user “computer name” newpassword
Tags: Chitko, Ubuntu, Ubuntu Myanmar Lo Co Team, UbuntuMM	|